[OFFICIAL] Mac-Android Data Recovery: Phinda Isuse / elahlekile Idatha Android
dr.fone yamathuluzi - Mac-Android Data Recovery
smartphone kanye tablet yokutakula isofthiwe Umhlaba uMac Android 1st.
Ngqo scan amadivayisi we-Android ukuze alulame idatha asusiwe.
Phinda nabo, imibiko, izithombe, imiyalezo WhatsApp, umsindo, ividiyo, imibhalo, njll
Landa uhlelo lokusebenza US Desktop Inguqulo
idatha Lost elahlekile. Asikwazi uyithole kusukela zimo eziningi ezifanayo abazithandayo.
Idatha badukile ngemuva yomgudu noma ROM Siyafulesha
Awukwazi ukuhlola kuqala bese uhlole yonke idatha ku Chile lokuskena phambi yokutakula. Le software Mac-Android idatha yokutakula ikuvumela ukuba ikwenzele khulula.
Lokhu yokutakula idatha Android kwi-Mac ikuvumela ukuba alulame iyiphi into ofuna ngokuhlola kuyo Chile lokuskena.
Lolu hlelo Mac-Android yokutakula idatha usebenza amafoni phezu 6000 Android ne amaphilisi kusuka Samsung, HTC, LG, Sony, Motorola, ZET, Huawei, njll
Ungasebenzisa lolu yokutakula idatha Android kwi-Mac kokubili amadivayisi we-Android nigxilile futhi unrooted. Ngemva yokutakula, idivayisi ibangelwa uzobe usazimelele, umuntukazana unrooted uyophinde ahlale.
Njengoba ekhadini le-SD ku-Android, ungasebenzisa le software Mac-Android idatha zokuthola ngqo scan efonini noma kuthebulethi yakho, noma ixhume umfundi ikhadi. Bobabili umsebenzi.
Le software Mac-Android yokutakula idatha kuphela-funda isofthiwe Android idatha yokutakula, engozini-free ..
Lokhu yokutakula idatha Android kwi-Mac uthatha kuphela 3 baby izinyathelo, akukho amakhono computer ebuzwa nhlobo ..
Zonke abasebenzisi le software Mac-Android idatha yokutakula ungakwazi ukujabulela kokuthuthukisa khulula esikhathini esizayo.
Buyisa Idatha Kusukela ...
Skena kudivayisi yakho ukuze alulame idatha elahlekile
Indlela Phinda Isuse Imilayezo esuka Android?
Indlela Phinda Oxhumana ususiwe kusuka ku-Android Amadivayisi?
Indlela Phinda ifotho ezisusiwe Android Amadivayisi?
Indlela Kulula Phinda Isuse Idatha kusuka Samsung Cell Hambayo?
Indlela Phinda ususiwe imiyalezo esuka Samsung Galaxy S6?
Samsung Galaxy S3 Ngeke Vula [Solved]
Indlela Phinda imiyalezo esuka Broken Amadivayisi Android?
Android Recycle Bin - Indlela Buyisela ususiwe Amafayela e-Android